News – HORN AFRICAN SCHOLAR
HORN AFRICAN SCHOLAR
News ProgramsLeave a comment
Ururka Horn African Scholars (HAS) oo deeq afurin ah gaarsiiyay dad masaakiin ah. Halkaan ka daawo
Hornas June 9, 2021	 June 9, 2021
News ResourcesLeave a comment
Guddoomihacusub ee ururka HAS oo u mahadceliyay xubnaha ururka.
Hornas December 7, 2020	 December 7, 2020
Waxaan maanta sharaf ii ah inaan mahadcelin gaar iyo mid guud u diro dhammaan intii ka soo qeybgashay shirkeena maanta oo taariikhiga ah iyo intaan ka soo qeybgelin oo waqtiga ama aalada la isticmaalayo u saamixi waayey/waysay.
Waxaan marka labaad ka codsanayaa xubnaha HAS inaan muujino isku dubnaan, wada shaqeyn, isku kalsoonaan iyo waliba isu tanaasulaad mararka qaar hadey yimaadaan waxyaabaha qaar ee la isku qabsado. La isuna dhimriyo, keena weyn u turo kiisa ka yar, si aan u ahaano ul iyo diirkeeda, isu tiirsanaano.
Waxaan soo jeedinayaa inaan mar waliba howlaha HAS aan ka dhigno ahmiyada inoogu weyn inaan gaarsiino meesha ugu sarreysa, waayo HAS waa:-
-Ishii u bikaacday ummadda Soomaaliyeed ee daafaha dunida iyo dalkaba ku kala nool gaar ahaan qowmiyadeena aan ka dhalanay ee Jareerweyne (Bantu), xaqiiqdii u badan deegaanadooda jiinka webiga, taasi micnaheeda ma aha inaanan degeneen meelo kale ee dalka ka mid ah.
-Aqoonyahanadii ku midoobay inay aqoontooda iyo waayo aragnimadooda ugu hiiliyaan dalkooda iyo dadkooda maanta uguna baahi badan dadyowga kale ee dalka inagula nool.
-Meeshii loo soo hirado loona soo raadsado horu marinta bulshada, baabi’inta dulmiga, midabtakoorka, sed bursiga, dhulboobka guud ahaan ku xadgudubka xuquuqda bini’aadamka.
Gebogebadii, hadeynu wada jirno, iskuna kalsoonaano waxaan aaminsanahay inaan gaari karno yoolkeena/hadafkeena aan hiigsaneyno.
Waxaa ugu dambeyn ugu baaqayaa dhammaan xubnaha HAS ee hadda jira iyo kuwa inagu soo biiri doona intaba in danta guud laga hormariyo tan gaar.
Suleymaan D. Bocorey
Guddoomiyaha ururka HAS oo axada la doorandoono.
Hornas December 3, 2020	 December 3, 2020
Ururka Aqoonyahanada Geeska Afrika, ayaa dib u dooran doona hogaan cusub, kadib markii uu is casilay guddoomiyihii hore ee ururkaas.
Xilkaan ayaa u taagan Mustafa M. Harun iyo Suleeban D. Bocoreey oo dhamaantoo ka wada tirsan xubnaha aas’aasay ururka.
Labada musharax ayaa soo bandhigay qorshahooda wax qabad ee mustaqbalka ururka.
Todobaadkii hore ayeey ahayd markii codsigooda la qabtay isla markaana su’aalo laga waydiiyay xilka ay qabandoonaan iyo howsha sida ay u qabandoonaan.
Guddiga doorashada HAS, ayaa ku qancay cudsi soo gudbintooda musharaxiinta, waxayna qorsheeyeen doorasho kale oo dhici doonta axada si loo helo hogaamiye howsha taala meesheeda ka sii ambaqaada.
Guddiga fulinta Muqdisho oo gaaray Afgooye.
Hornas November 15, 2020	 December 3, 2020
Ururka Horn African Scholars (HAS) oo deeq afurin ah gaarsiiyay dad masaakiin ah. Halkaan ka daawo June 9, 2021
Guddoomihacusub ee ururka HAS oo u mahadceliyay xubnaha ururka. December 7, 2020
Guddoomiyaha ururka HAS oo axada la doorandoono. December 3, 2020
Guddiga fulinta Muqdisho oo gaaray Afgooye. November 15, 2020
© HORN AFRICAN SCHOLARS 2020-2021